TOMATO "DE BARAO": SHARAXAAD IYO BEERISTA NOOCYO KALA DUWAN - NOOCYO YAANYO
Sida loo koro yaanyo "De Barao" ee beertaada
Maanta waa yaanyo waa wax caadi ah miis kasta. Dadka degaanka xagaaga iyo kuwa beerta waxay u tixgeliyaan xukunka si ay u koraan khudraddan sariirahooda. Dunida waxaa jira noocyo badan oo yaanyo ah, mid kastana waa mid gaar ah oo dhadhan fiican leh. Laakiin ka mid ah noocyo kala duwan oo yaanyo ah "De Barao" waxay mudan yihiin dareen gaar ah.
Tamaandhada "De Barao" waxay leedahay qaybo hoose: casaan, jaalle, orange, madow, jilicsan, giant, dahab iyo boqor.
Laakiin, inkastoo ay kala duwan tahay, "De Barao" wuxuu leeyahay sifooyin gaar ah: wuxuu kici karaa sanad ama ka badan, halka la siinayo waxtarka ballaaran ee tayo sare leh. Maqaalkani waa mid aad u weyn oo ballaaran, midna wuxuu ku kori karaa ilaa toban miraha. Laga soo bilaabo hal baadiyaha waxaad ka qaadan kartaa ilaa 4 kg oo yaanyo ah.
Qeexida iyo noocyada yaanyo "De Barao"
Darajada "De Barao" waxaa loogu talagalay beeritaanka xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo, laakiin sidoo kale beerista dhibaatooyinka dhulka ku furan ma'aha.
Ma taqaanaa? Tamaandhada "De Barao" oo adkaysi u leh dabaylo goor dambe.
Noocyada noocan ah ee yaanyada xawaare ah Bisaylkiisa ayaa loo aaneyn karaa qaybta dambe ee dambe. Laga soo bilaabo muddada bilowga ah ee bilawga ah ee miro ee ku saabsan 120 maalmood gudub. Yaanyada yaryar ee ukunta, celcelis ahaan 60-70 g, laakiin boqortooyada "De Barao" - ilaa 120 g
Tamaandho si fiican u bislaadaan banaanka baadiyaha. Delicious salad iyo taxadar la'aan ah ee ilaalinta. Khudaarta ayaa si wanaagsan u dulqaatay gaadiidka, si ay faa'iido u leeyihiin inay u koraan ujeedooyinka ganacsiga.
Qaar ka mid ah noocyada kala duwan ee "De Barao":
Orange "De Barao". Waxaa lagu gartaa maadada sare ee carotene, sidaa daraadeed, wuxuu leeyahay midab khafiif ah. Burburku wuxuu ku koraa 300 cm Muddada koritaanka - 4 bilood.
Miraha waa dhadhan, oranji, boomo, miisaankeedu yahay ilaa 100 g. Noocyada noocan ah waxay ku kori karaan labada aqalka dhirta lagu koriyo iyo berrinka bannaan. Ku habboon ilaalinta iyo saladhka.
Giant "De Barao". Burburku waa mid dheer oo awood leh. Marka koraan aqalka dhirta lagu koriyo uma baahna xaalad gaar ah ama daryeel. Noocyada kala duwan ee yaanyada, "De Barao" ayaa ugu dambeyntii dhicisoobay.
Laakiin waqti isku mid ah midhaheedu waa weyn - ilaa 210 g, casaan oo midab leh, midab leh. In cimilada diiran, waxay sii wadi kartaa ubax ilaa dayrta, ku faraxsan tahay midhihiisa. Warshadda waxaa lagu kori karaa dhul furan.
Pink "De Barao". Marka la barbar dhigo noocyada kale ee casaanku wuxuu siinayaa dalag yar oo yar yar - 3-4 kg. Kala duwan tani waxay ku fiican tahay koriyo. Tamaandhada "De Barao" casaan badan oo jilicsan ayaa soo jiidanaya midabkiisa aan caadiga ahayn.
Qeexitaanka noocyada kala duwan waxaa laga heli karaa buugaag ku saabsan beeritaanka wakhtiyada Midowga Soofiyeedka. Miraha miisaankeedu yahay ilaa 70 g, oo leh dhadhan wacan iyo maqaar qaro weyn.
Kala duwanaanta noocaas ah waxay ku fiicantahay aagagga meelaha hooseeya, markaasoo subaxda qabow ku dhacdo. For yaanyo kale waxaa ka buuxsamay cuduro kala duwan, laakiin casaan "De Barao" waa mid aad u fiican.
Royal "De Barao". Maadada wuxuu koraa 250 cm Miro ilaa 130 g waa casaan-casaan. Foomamka ilaa 10 jeer oo buro miro ah, mid kastana leh ilaa 7 miro.
Iyada oo xaaladaha cimilada wanaagsan, dalagga ayaa laga goyn karaa ka hor dhaxan ugu horeysay. Tsar's "De Barao" waxaa lagu daray liiska noocyo dhif ah, sidaas darteed abuurka way adag tahay in la helo.
Black "De Barao". Noocyo badan oo kala duwan iyo midabyo kala duwan. Waxaa xiiso leh midabkiisa, kaas oo xuduud u dhexeeya madow iyo burgundy. Miraha waa cufan oo weyn u ah ilaalinta.
Golden "De Barao". Kala duwanaansho heer sare ah ee dhalid iyo korantada. Xilliga laga bilaabo hal baadiyaha waxay qaadan kartaa ilaa 7 kg oo yaanyo ah. Yaanyo dahab ah "de barao" (caan ah "jaalle") waxaa ku jira xaddi badan oo carotene ah.
Red "De Barao". Ripens 120-130 maalmood. Waxay u koreysaa ilaa 2 m. Midhaha miraha waa celcelis, 90 g. Ilaa 4 kg ayaa laga soo qaadi karaa hal baadiyaha.
Waxay ku haboon tahay beerashada labadaba xiran, iyo dhul furan. Bannaanka ayaa ku talinaya noocyada kala duwan ee ilaalinta.
Dhibbane "De Barao". Miraha waa oval-qaabeeya, ilaa 70 g. Tamaandhada waa cufan, dhadhan fiican, oo ku habboon ilaalinta. Marka cirifka "De Barao" uu wax ku dhaco, waxay noqotaa casaan, oo leh jilbaha madow. Ku adkaysashada duufaanta goor dambe.
Sidee iyo goorta ay beeraan bacaha yaryar ee Barao
Diyaargarow shinni ahaaneed - Xaalad aad u adag oo waqti badan qaadatay. Hadda iibka waxaa jira noocyo kala duwan oo ah noocyada kala duwan ee "De Barao". Waxay ku jiraan daaweyn jeermis ah, waxay ku daboolan yihiin lakab nafaqo leh oo wax ku ool ah.
Haddii aad aragto in miraha ay leeyihiin qolof midab leh, waxaad si ammaan ah u abuuri kartaa sanduuqyada seedling. Laakiin haddii miraha ay caadi yihiin, iyada oo aan lahayn xirmooyinka ilaalinta, waxay u baahan yihiin u diyaarso dalab.
Waxaad u baahan tahay inaad jarjartid faashado yar ama faashad suuf ah (ilaa 20 cm). In dhexe ee faashadda ku shub dhowr a miraha yaanyo iyo duub tubbadda faashad, xirashada cidhifyada ee thread.
Ku dheji khaanadahan ku jira weel diyaarsan oo buuxi xalka dareeraha ee 15 daqiiqo. Ka dibna biyo raaci oo si fiican u biyo raaci biyo.
Waxay lagama maarmaan tahay 12 saacadood si loo abuuro abuurka xalka kiciyaha kobaca.
Waa muhiim! Ka hor inta aadan abuurin xalka kiciyaha kobcinta, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u akhrido tilmaamaha.
Ka dibna miraha waxaa laga saaraa xalka oo ka buuxsamey biyaha si faashaduhu u buuxsamaan biyo. Waxaad u baahan tahay inaad ku riddo weelka abuurka meel diiran 48 saacadood. Daryeelka waa in la qaato si loo xajiyo faashadaha.
Kadibna (adoo adkeynaya), abuur abuurka qaboojiyaha leh heerkul ah + 3-5 ° C 12 saacadood.
Wixii beerashada abuurka ah "De Barao" waxaad u baahan tahay inaad marka hore diyaariso sanduuq loogu talagalay geedo iyo ciid. Si aad u hesho substrate nafaqo for geedo mustaqbalka, dhulka iyo humus loo baahan doonaa in qaybo siman.
Waa muhiim! Wixii beerashada miraha, "De Barao" waxay u baahan tahay humus jilicsan oo jajaban.
Sidoo kale carrada this waxaad ku dari kartaa 30 g of superphosphate iyo galaas oo ash ah.
Marka barafku dhalaalay, hareeraha badhtamaha bisha Maarso, waxaad abuuri kartaa miraha "De Barao" geedo. Abuurkii hore loo diyaariyey waa in lagu beeraa carrada nafaqo leh, oo daboolay lakabka 0.5 cm ee dhulka dusha sare Ka dib markaad abuurto miraha, ku shub xalka xalinta kareemka iyadoo loo marayo shaandho.
Sanduuqa abuurka ayaa si fiican loo dhigayaa dhinaca qorraxda. Labada maalmoodba mar waa lagama maarmaan in la ilaaliyo qoyaanka dhulka. Haddii ay qallalan tahay, ku shub biyo diirran geedo mustaqbalka ah.
Toddobaad ka dib, caleemaha ugu horreeya ayaa soo baxaya.
Sida loo koro "De Barao", xeerarka daryeelka ee geedo
Iyada oo daryeel ku habboon geedo waxaad ka heli doontaa duurka qurux badan oo xooggan oo keeni doona dalagyo buuxa oo buuxa. Ka hor inta caleemaha ugu horeysay u muuqdaan, waxaa lagama maarmaan ah in lagu hayo heerkulka qolka sanduuqyada geedo leh geedo lagu hayo, qiyaastii 25 darajo.
Ka dib geedo soo kordhay, waxaad u baahan tahay inaad hoos u dhigto heerkulka usbuuca ugu horeeya ilaa 15 darajo, iyo habeenkii ilaa 10aad. Toddobaadkan ka dib, heerkulku waa la kiciyaa ilaa 20-25 digrii maalmaha qorraxda, iyo heerkulka daruuriga ah - illaa 18. Habeenkii heerkulka ayaa hoos loo dhigay 16 ° C.
Waa muhiim! Waxaa lagama maarmaan ah in si joogta ah hawada loo daboolo geedo oo si dhow ula soco in foornooyinku aysan ku dhex marin.
Dhirta dhalinta yar waxay u baahan yihiin in la kala sooco biyo iyada oo loo marayo buufin. Ilaa caleemaha ugu horeysa ee geedo u muuqday, ciidda aan la waraabin. Ka dib dhirta ay leeyihiin 5-6 caleemo, geedo u baahan yihiin in la waraabiyo 3-4 maalmood kasta.
Horumarka caadiga ah, dhirta dhalinyarada waxaa la siiyaa helitaanka iftiinka qoraxda ilaa 12-16 saacadood. Haddii aadan siin karin iyaga oo buuxa, waxaa lagu talinayaa in ay ku quudiyaan geedo leh xal daciif ah Bacriminta potash ah.
Yoobashada yaanyo "De Barao" waxay u baahan tahay in la quudiyo 2 wiqiba mar iyada oo lagu xalinayo superphosphate (20 g halkii 10 l oo biyo ah). Markay koraan, waxaa lagu wareeri karaa weelal gooni ah. Marka geedo koraan, ku dar lakabka carrada (1-2 cm) si ay dherarkooda, kaas oo siin doona xasilooni iyo kordhinta socodka nafaqooyinka.
Geedo geedo ah dhulka
Haddii aad ku beeri geedo bishii Maarso, dhamaadka bisha May yaanyada yaryar waxay gaadheysaa 50 cm oo dherer ah.
Haddii cimiladu diiranto, geedo waxaa loo qaadi karaa hawo nadiif ah oo hoos ah. Yaan loo beeray bilowgii horraantii Juun.
Ma taqaanaa? Bannaanka ayaa lagu talinayaa in ay ku beeri geedo dhul furan fiidkii - dhirta ayaa bilaabi doona dhakhso.
Ceelasha waxaa lagu qodaa fogaan ah 90 cm. Waxaad ku dari kartaa dharka ugu sarreeya (humus, compost) iyaga, ka dibna dhirta ayaa bilaabi doona in ay qaataan si ka wanaagsan oo degdeg ah.
Warshad kasta waa in lagu xiraa taageerada dabiiciga ah. Haddii ay dhacdo dhaxan aan la filayn, diyaariso filim kaas oo aad dabooli karto dhirta.
Sida loo daryeelo noocyo kala duwan oo yaanyo ah "De Barao"
Abuuritaanka baadiyaha yaanyo loo yaqaan "isgaadhsiin".
Hilibka yaanyo - kuwan waa caleemaha dhinaca geedka. Muuqashada - Ka saara caleemaha dhinaca ka hortagaya yaanyo ka sameysan miraha. Qaar ka mid ah noocyada yaanyada waxay u baahan yihiin nidaam noocaan ah (nooc aan caddayn), halka kuwo kale aysan u baahneyn wax cagaaran (noocyo kala duwan).
Yaanyo "De Barao" ayaa leh qaybta koowaad, sidaas darteed, qabashada xashiishka ayaa loo tixgeliyaa nidaam khasab ah. Tamaandhada waxay ku bixisaa tamar aad u badan on formation of afkoda kuwan, sababtoo ah ma jiraan miraha on, ama badan oo yaryar, si tartiib ah u bislaaday tamaandhada ayaa la sameeyay.
Ma taqaanaa? Bannaanka intiisa badani waxay ku talinayaan in yar yar "dhoobo" yar oo ku dheggan marxaladda joogtada ah - tani waxay ka hortagtaa abuurista cusub.
Kalluunka ku yaala dhirtu waxay ku koraan cirifka caleen, oo ah asliga ah. Waxaa lagula talinayaa in laga saaro geeddi-socodkan oo kale marka ay yar yihiin (ilaa 5 cm). Xaaladdan oo kale, qaabsocodku wuxuu u dhici doonaa dhirta iyada oo aan wax saameyn ah ku yeelan doonin. Bannaanka ayaa ku talinaynaa in ay ka saarto subaxda ama cimilada qorraxda - nabarrada ayaa qalajin doona oo bogsiin doona hal maalin.
Waa muhiim! Suuqgeynta waa in si joogto ah loo sameeyaa! 4-5 maalmood oo kasta.
Fasalka "De Barao" waxaa lagula talinayaa in la sameeyo 2-3 cag. Waxay ku xiran tahay cabbirka midhaha kala duwan ee "De Barao".
Waraabinta iyo daryeelka dhirta
Tamaandhada "De Barao" ayaa aad u doonaya daryeelka iyo waraabinta. Weyn oo weyni waa tamaandhadu waxay u adkeysanayaan dabaylo goor dambe ah, beerahooda wax dhibaato ahna maaha.
De Barao waxay u baahan tahay biyo badan. Gaar ahaan maalmaha kulul, waxaad ku shubi kartaa ilaa 1 baaliin hoos mug walba. Biyo yaanyo heerkulka qolka. Marka hore, qoyi lakabka ugu sareeya ee ciidda, ha la qooyey biyaha, kadibna dhowr daqiiqadood kadib, ku shub biyo ku hartay.
Marka cimiladu qorraxdo, 2-3 jeer oo kasta oo la kariyey, calool-xumo - 5-ta maalmoodba mar.
Waa muhiim! Ka dib markii aad waraabisay warshadda, waxaad u baahan tahay inaad xoqdo carrada.
Tamaandhada "De Barao" waa kuwo aad u sarreeya, sida ugu dhakhsaha badan ee aad u beeratay geedo, waxaad u baahan tahay inaad baadho baadiyaha si aad u hesho taageerada. Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo jajabyo badan, nadiifinta caleemo qallalan iyo jeexa caleemaha hoose si loo wanaajiyo hawo geedka.
Tamaandhada "De Barao" waa noocyo dhexdhexaad ah. Noocyada noocan oo kale ah ee xaaladaha cimilada ayaan haysan waqti si buuxda u bislaadaan.
Laakiin waxay si fiican u bislaadaan baadiyaha. Sababta oo ah inay bannaanka u bilaabaan inay soo ururiyaan August. Ha ilaawin ujeedada ururinta (salting, caano ama isticmaal).
Waxaa jira dhowr marxaladood oo yaanyo goosan ah: cagaar, caddaan iyo bislaado. Cagaarka cagaaran iyo kuwa cadcad ayaa lagu kaydiyaa wakhti aad u dheer, iyadoo weli dillaacaya. Waxa ugu muhiimsan waa in la dhigo qol leh hawo wanaagsan.
Yaanyada bislaado waxaa loo goostay si dhakhso ah loo isticmaalo - yaanyo, juuska, juuska yaanyo ama cunto. Nolosha sheyga - aan ka badnayn shan maalmood.
Tamaandho ah qaanad cagaaran iyo caddaan cad oo qolka qaboobaha ah ayaa lagu kaydin karaa ilaa hal bil.
Waa muhiim! Goosashada yaanyo uma dulqaadan karo qoyaan iyo qoyaan.
Horumarinta yaanyada "De Barao" - waa hawl adag, laakiin dhamaadka dadaalkaaga waxaa lagu abaalmarin doonaa miraha dhadhan fiican leh iyo mid caafimaad leh.